"सहकारीका कमजोरी सुधार्छौं", मीनराज कँडेल –अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
अन्तर्वार्ता/विचार मंगलबार, माघ ७, २०७६
अध्यक्ष– राष्ट्रिय सहकारी महासंघ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको २७औं साधारणसभाबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष चुनिएका मीनराज कँडेल भन्छन्, “देशका कुनाकुनाका जनतालाई सहकारी अभियानमा जोड्छौं।”
नेपाली अर्थ–सामाजिक परिवेशमा सहकारीको भूमिका कस्तो छ ?
नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा ३५ हजार सहकारी संस्थामा आबद्ध ६५ लाख सदस्यहरुले महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । खासगरी आय बढाउन, गरीबी घटाउन, ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहकारीको ठूलो योगदान छ । सहकारीले जनतालाई सामूहिक आवाज दिएको छ । सहकारी क्षेत्रले वार्षिक रु.७ खर्ब बराबरको कारोबार गर्छ, यो कुल वित्तीय क्षेत्रको ३१ प्रतिशत हाराहारी हो ।
सहकारीलाई बेथिति र समस्याको घर भनेर पनि टिप्पणी गरिन्छ नि !
केही सहकारीले गरेको बदमासीका कारण सहकारी क्षेत्रको कामकारबाहीमा प्रश्न तेर्सिएको हो । हजारौंमध्ये एकाध संस्थाले गरेका कमजोरीकै आधारमा समग्र सहकारी आन्दोलनमाथि नै प्रश्न उठाउनु जायज हुँदैन । सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अपनाएर कमजोरी सुधार्दै यो अभियान अघि बढिरहेको छ ।
सहकारी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ किन दिएन ?
उत्पादन तथा प्रशोधनको काम गर्ने सहकारीले अपेक्षित काम गर्न नसकेको साँचो हो । अहिले ३०० भन्दा बढी सहकारी संस्थाले कृषि र उद्योगका उत्पादन र प्रशोधनका काम गरिरहेका छन् । अब सहकारी मार्फत व्यवसायीकरणको अभियान शुरु गर्छौं । कृषि र पर्यटनका मेगा प्रोजेक्टमा पनि हात हाल्छौं ।
नेपालमा सहकारी अभियानको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपालको संविधानले नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बामध्ये एक मानेको छ । छरिएर रहेका पूँजी, सीप र क्षमतालाई एकीकृत गरी नागरिकको जीवनस्तर उठाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र उत्पादनमूलक क्रियाकलाप अघि बढाउन सहकारी सबैभन्दा प्रभावकारी हुनसक्छ । उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न सहकारी अभियानलाई गाउँगाउँसम्म विस्तार गरे भविष्य राम्रो छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको भावी योजना के छन् ?
निजी क्षेत्र र राज्यसँग मिलेर सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी (पीपीसीपी) को अवधारणा अघि बढाउन पहल गर्छौं । सहकारीमैत्री ऐन, कानून बनाउन ‘लबिङ’ गर्छौं । गाउँगाउँका जनतालाई यो अभियानमा जोड्दै गरीबी घटाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न पहल गर्छौं ।